ဦးထွန်းအောင် ရေနွေးကရားကိုငှဲ့လိုက်ပြီး ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကိုလှမ်းပေးရင်းမေးလိုက်သည်။
ရေနွေးကြမ်းကိုတကြိုက်မှုတ်သောက်လိုက်ရင်း ဖိုးစိန်တစ်ယောက် ၀မ်းသာအဲလဲနှင့် ဖြေသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ရွာကို မြို့ကကျန်းမာရေးဆရာမ ရောက်မယ်တဲ့ဗျ ဘကြီးရ.”
“ ဟေ ..ဟုတ်လား သေချာလို့လားကွာ. မင်းဘယ်ကနေသတင်းကြားလာပြန်တာတုန်း ”
“ ဟိုလေ ဟို.ဦးလေးရေချမ်းရယ် ပြောတာ. သူကရေအိုးကုန်းရွာဘက်ကကြားလာတာတဲ့”
“ ဟာ ခွေးကောင်ရ ရေချမ်းပြောတာကိုမင်းကယုံနေတယ် ဒုက္ခပါပဲကွာ ငါကအဟုတ်မှတ်လို့”
“ ဟုတ်တယ် ဘကြီးရ ဦးလေးရေချမ်း ခုဘဲ မြင်းပလုံချောင်းဖက်ကနေပြန်လာတာကျွန်တော်တွေ့တယ် . သူ ပြောတာဘဲ ရေအိုးကုန်းရွာကလူတွေပြောနေတာ ကြားခဲ့တယ်တဲ့ ။”
“အင်း……ဒီကောင့်စကားကမယုံလို့လဲမရဘူး..ခက်သားလား” . “တကယ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာတို့ရွာမလဲတစ်ခုခုဆိုတတ်သိနားလည်တဲ့ဆရာမမရှိ ဖြစ်လာရင်အရေးပေါ်မှကုတတ်တဲ့သူမရှိ မြင်းပလုံချောင်းရေတက်နေပြန်ရင်လဲဘာမှလုပ်မရနဲ့.မသေသင့်ဘဲသေခဲ့ရတဲ့အသက်တွေလဲမနည်းပေါ့ကွာ။တကယ်သာဆိုမင်္ဂလာသတင်းပဲ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ.။”
ဦးထွန်းအောင်တို့ရွာမှာဆိုလယ်ယာကျွဲနွားများနှင့်ရေချမ်းတို့မိဘများကတောင့်တင်းသည်။။ရေချမ်းမှာမောင်နှမသုံ်းယောက်ရှိသည်။ရေချမ်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ရေချမ်းကိုချစ်လိုက်သမှတုန်နေအောင်ချစ်ကြသည်။မမျှော်လင့်သောကံကြမ္မာဆိုးကရာက်လာလေရာရေချမ်းဆယ်နှစ်သားအရွယ်မိဘတွေကတဖက်ရွာရအိုးကုန်းအလှုကအပြန်ညဖက်တွင်မြင်းပလုံချောင်းကိုဖြတ်အကူးမမျှော်လင့်သောတောင်ကျချောင်းရေများကျလာရာမိဘများနှင့်အကိုရောအမပါတာင်ကျရေနှင့်အတူ မျောပါ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးသုံးရက်မြောက်လွန်ကာမှအလောင်းကို ချောင်အကျေနေရာမှ ပြန်ဆယ်၍ရခဲ့ကြသည်။ရေချမ်းတစ်ယောက်ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ကျောက်ပေါက်နေသဖြင့်ကြီးဒေါ်ဖြစ်သူနှင့်အတူကျန်ခဲ့လေသဖြင့်အသက်ရှင်ခွင်ရခဲ့သည်။
ရွာမှကလေးငယ်များငိုလျှင်“အဲ..ဦးရေချမ်းနဲ့တိုင်ပြောမယ်နော်..အဲ...ဦးရေချမ်းကြီးလာပြီ”ဟုခြောက်လှန့်ကြသည်။တခါတခါ ဆော့နေကြကလေးငယ်များနှင့်ဆော့ကစားရန်သွားလျှင်တခါတလေလူကြီးများကဟဲ့ ရေချမ်းသွားသွားနင်လိုအရူးနဲ့ကလေးတွေစိတ်မချပါဘူးနင့်မှာယားနာတွေနဲ့ကလေးတွေကိုကူးကုန်မယ်ဟုအော်ငေါက်လွှတ်လျှင်ရေချမ်းခင်မျာအဲအိမ်ရှေ့တွင်တွင်တွင်ရပ်ကြည့်ရင်းစိတ်မကောင်းစရာမျက်နှာငယ်လေးနှင့် ခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့်လှည့်ပြန်သွားတတ်သည်။ရွာမှာအလှုအတန်းဆိုလဲအောက်ခြေသိမ်းကအစရချမ်းအကုန်သိမ်းကြုံးလုပ်ပေးသည်။အားလုံးပြီးသွားလျှင်ဆရာတော်ကျောင်းအောက်သွားပြီးကုပ်ကုပ်လေးထိုင်နေတတ်သည်။ဆာသည်လဲမပြော။ဆရာတော်က“ဟဲ့.ရေချမ်းစားပြီးပလား။ရေချမ်းကိုထည့်ပေးလိုက်ကြဦးဟေ့”ဆိုမှလက်အုပ်လေးချီပြီးထိုင်နေရာချောင်ထဲမှာကုပ်ကုပ်လေးထွက်လာရှာသည်။
သူများဘူးသီးအရက်မူးပြီးဝင်ခိုးလဲရေချမ်းမြင်သည်။ကြက်ခိုးလဲရေချမ်းမြင်သည်။စပါးခိုးလဲရေချမ်းနှင့်တိုးသဖြင့်ဆရာတော်ပြန်သိလေရာကြိမ်လုံးစာခနခနမိသည်။ငှက်ပစ်လဲရေချမ်းနှင့်တိုးလျှင်ရေချမ်းကတုတ်နှင့်လိုက်တတ်သဖြင့်ရေချမ်းကိုသူတို့ညီအကိုကကြည့်မရ။စကားလဲများများမပြော။ပာသည့်စကားများကလဲမှန်တတ်သည်။ခုလဲရေအိုးကုန်းရွာကလူများချောင်းရေကျတုန်းဒီဘက်ကိုလာသလား။သူဘဲရံဖန်ရံခါသွားတတ်သလိုများသွားရင်းကြားလာသလားမသိ။ကျန်းမာရေးဆရာမရောက်မည်တဲ့။ဦးထွန်းအောင်တို့ကန်သာရွာနှင့် ရေအိုးကုန်းရွာ နှစ်ရွာကြားမှာ မြင်းပလုံချောင်းကခြားနေသည်။ မြင်းပင်ပလုံကနဲနေအောင်ပးမလွတ်ဘဲတောင်ကျရေနှင့်တရှိန်ထိုးပါတတ်သောထိုချောင်းကိုမြင်းပလုံချောင်းလို့အမည်တွင်ခဲ့ပြီးမကြာခနလူသေတတ်သောမထင်မှတ်သောအချိန်မှာတောင်ကျရေများကစီးလာတတ်ပြီးအသက်ဇီဝိန်ချွေသောချောင်းဖြစ်လေရာမိုးတွင်းဆိုတော်ယုံနှင့်ထိုချောင်းကိုမကူးရဲကြပေ။ နွေရာသီတွင်ပြသနာမရှိသော်လည်းမိုးတွင်းကာလများနှင့်ဆောင်းတွင်းတွင်မြစ်အညာဖက်မှမိုးရွာချလိုက်ပါကချောင်းအ
ဦးထွန်းအောင် တိုးတိုးလေးညည်းမိရင်း သက်ပြင်းရှည်ကြီးတချက် သာချလိုက်မိတော့သည်။
“ဘကြီးရေ....ဘကြီးရေ မြိ့ကဆရာမတကယ်ရောက်လာပြီဗျသိလားဦးလေးရေချမ်းပြောတာမှန်တယ်ဗျ။ငယ်ငယ်ချောချောလေးရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးဗျာသိလား။ခုဆရာတော့်ကျောင်းမှာ ရောက်နေတယ်။အခုဘကြီးကိုဆရာတော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့”
တစစ နှင့်မသီတာကိုတရွာလုံးကချစ်ခင်ကြပြီးဆရာဝန်မလေးဆရာဝန်မလေးနှင့်ပါးစပ်ဖျားကမချနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည်။ဟိုလူကထမင်းဖိတ်ကျွေးသည်အိမ်ကထမင်းဖိတ်ကျွေးနှင့်ရွာတွင်မသီတာမှာမျက်နှာပွင့်လှသည်။လူပျိုကာလသားတို့ကလဲအပြိုင်အဆိုင်မသီတာကိုပိုးပန်းကြ လျှောက်ပြန်သံပေးကြနှင့်ဦးထွန်းအောင်တို့အိမ်တွင်လာဘ်လာဘများပေါများလှလေသည်။
မသီတာကရေချမ်း၏ယားနာများကိုလဲမရွံမရှာသေချာကြည့်ရှု့ပြီးကုသပေးလေရာရေချမ်းကိုယ်မှယားနာများနှင်းခူများပင်ပျောက်လုလုဖြစ်နေပေပြီ။သဘောတွေကျကျနှင့်ရီနေပြီးဆရာမလေး ကျေးဇူးနော်.ဆရာမလေးကျေးဇူးနော်လို့တဖွဖွပြောပြီးဦးကုန်းချတတ်သဖြင့်မသီတာမှာမလုပ်ပါနဲ့ဦးလေးရယ်ဆိုပြီးအတင်းဆွဲထူရတတ်သည်။သန့်ရှင်းစွာဆးကြောပြီးဆေးထည့်ပေးလေရာရေချမ်းမျက်ဝန်းအိမ်တို့မှာဝမ်းသာသဖြင့်မျက်ရည်များပင်ဝဲလျှက်ရှိလေသည်။ရေချမ်းအပေါ်မသီတာကတရင်းတနှီးဆက်ဆံပြီးစားစရာသောက်စရာများကိုဆရာတော်ကျောင်းသို့ယူလာပေးရင်းဦးလေးရေချမ်းအတွက်ပါဆိုပြီးထည့်ပေးသွားတတ်သည်။ရေချမ်းကလည်းဘကြီးထွန်းအောင်တို့အိမ်ကိုညနေတိုင်လာပြီး ရေငင်ပေးပြီးလျှင်ဆရာမလေးချိုးဖို့ဟု ပြောသွားတတ်သည်။
ရေချမ်းပြေးဆင်းသွားပြီးမသီတာအနားရပ်လိုက်ပြီးဆရာဝန်မလေး နောက်ကျနေပြီ မြန်မြန်လာတော့ဟုဆိုလေသည်။မသီတာကရေချမ်းကိုမြင်သော်ဝမ်းသာအဲလဲနှင့်ဆိုရှာသည်။“ဦးလေးရေချမ်း..ကျမကိုလာစောင့်ပေးတာလား.ကျေးဇူးဘဲနော်။ နောက်ကျနေပြီ။ကျမလဲကြောက်လို့ဦးလေးရယ်။ဦးလေးထမင်းရောစားပြီးပြီလား။”ရေချမ်းခေါင်းတစ်ချက်ခါလိုက်သည်။ နောက်ဖြေးညှင်းစွာပြောသည်။“ဆရာမလေးကိုစိတ်ပူလို့”
“ ကိုဖိုးစိန် ဗျိူးးကို ဖိုးစိန် ဒီမှာ ဆရာဝန်မလေးဒီမှာ. ”
တောက်တခေါက်ခေါက်နှင့်ရေချမ်းကိုသတ်မယ်ဖြတ်မယ်တကဲကဲလုပ်နေလေရာကာလသားခေါင်းကိုစံသိန်းက“ကဲကဲ. ပြောနေကြာတယ်ဆရာဝန်မလေးကိုရွာထဲမြန်မြန်ခေါ်သွားကြ။ဥိးရေချမ်းကိုကြိုးတုတ်ပြီးမလာခဲ့ကြတော့ မြန်မြန်လုပ်ကြဆရာဝန်မလေးကိုစိုးရိမ်ရတယ်။”
ဒေါ်ခင်မှုံခင်မျာမသီတာဖြစ်ပုံကိုမြင်ရတော့ရင်ဘတ်စည်တီးဖြစ်ရသည်။ရေချမ်းကိုစိတ်တွေဆိုးသည်။တသက်လုံးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာကိုတောင်မှအားမနာအရုးခေါင်းပေါ်ချိးတက်ပါသည်ဟုတဗြစ်တောက်တောက်ဆိုနေသဖြင့်ဥိးထွန်းအောင်မှာမနည်းပါးစပ်ပိတ်ခိုင်းပြီးတတ်သမျှမှတ်သမျှနည်းမျိူးစုံနှင့်ဆရာဝန်မလေးကိုသတိရလာအောင်လုပ်ကြသည်။ရေချမ်းကိုတော့ဆရာတော့်ကျောင်းအောက်မှာချုပ်ထားလိုက်သည်။ဆရာတော်ကရေချမ်းကိုလဲသတိရအောင်လုပ်ကြဟေ့သတိရလာမှအကုန်မေးလို့ရမှာဟုဆိုပြီး ခေါင်းမှဒဏ်ရာများကိုကိုယ်တိုင်ဆေးထည့်ပေးသည်။နှစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကြာသော်.မသီတာနည်းနည်းလှုပ်လာသည်။တစ်ကိုယ်လုံးကိုင်ရိုက်ထားသလိုပျော့ခွေနေသည်။ခေါင်းကလုံးဝထူမရ၊ချာချာလည်အောင်မူးနေသည်။ကြိုးစားပြီးအသံထွက်ကြည့်သည်။စိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်သတိရလိုက်သည်ကဦးရေချမ်း။သူမအတွေးထဲရောက်လာသည်ကဦးရေချမ်းသွေးတွေခေါင်းမှာဖြာကျပြီး ခွေခနဲလဲသွားတဲ့ဦးရေချမ်း။သူမကိုဝင်ဆွဲရင်းအရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးရေချမ်း။ပါးစပ်ကအသံတိုးတိုးလေးထွက်လာသည်။
“ ဦးရေချမ်း ..ဥိးရေချမ်း ”
“ သမိးလေး .သမိးကိုဘယ်သူလုပ်လဲ ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်လဲ အရီးတို့ကိုပြောပြနော် သမီးလေး ”
မသီတာ ခေါင်းကမထူနိုင်။ ပါးစပ်ကတိုးတိုးလေးလှုပ်သည်။“ ဦးရေချမ်း…ဦးးး………….ရေချမ်း ”
“ ဟာ.မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကွာ ”
“ ဒီအရုးကွာ .”
ဆရာတော်ပင်မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ ရေချမ်းကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာတာတခါမှဒီလိုဆိုးဆိုးရွားရွားမကြားဖူးခဲ့။“ကဲ..ကဲ။။လာလာ..ကျာင်းအောက်တိုင်မှာချုပ်ထားတယ်။ဟဲ့ကိုရင်တွေလာကြစမ်းမီးအိမ်တွေယူပြီးအောက်ဆင်းလာခဲ့”ဆရာတော်အသံကြောင့်ကိုရင်များမီးအိမ်ထွန်းပြီးအောက်သို့ဆင်းကြသည်။ဖိုးစိန်လဲဆရာတော်နှင့်အတူကျောင်းအောက်ဆင်းလိုက်လာခဲ့သည်။ကိုရင်လေးတစ်ပါးကအနားမှာစောင့်နေပြီးရေချမ်းကိုကျောင်းအောက်မှာကြိုးချည်ထားရာဒဏ်ရာများကိုဆေးထည့်ထားပေးသဖြင့်သတိရစပြူနေပေပြီ။သို့သော်လည်းသွေးထွက်များနေသဖြင့်မျက်နှာကဖြူလျော်လျော်ဖြစ်နေသည်။လူကမလှုပ်နိုင်။ဆရာတော်ကအနားရောက်တော့“ရေချမ်း..ငါ့ကိုအမှန်အတိုင်းလျှောက်စမ်း။မင်းဆရာဝန်မလေးကိုအန္တာရယ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်လား”။ဆရာတော်အသံမာမာကိုကြားသော်ရချမ်းမျက်စိသူငယ်နှင့်နားမလည်သလိုကြည့်နေသည်။ဆရာတော်ထပ်မေးသည်။
“ ရေချမ်းမှန်မှန်ဖြေ။ဆရာဝန်မလေးကိုမင်းဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်သလား။”ဆရာတော်အမိန့်ကိုဘယ်တုန်းကမှမလွန်ဆန်ခဲ့သောရေချမ်း ခေါင်းတွင်တွင်ခါသည်။“မင်းမဟုတ်ဘူးးပြောပေမယ့်ဆရာဝန်မလေးကခုသတိပြန်ရလာပြီ။မင်းသူ့ကိုမကောင်းကြံတာပါလို့ပြောတယ်လို့ခုဖိုးစိန်လာပြောတယ်။မှန်မှန်ဖြေ”ငယ်ကြောက်ဖြစ်လေသောဆရာတော်ကိုတွေတွေကြီးကြည့်လျှက်“မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး.” ။မဟုတ်ဘူးချည်းဖြေသည်။ဘာမှလဲမပြော။ခပ်လှမ်းလှမ်းကျောင်းဝန်းထိပ်မှလူသံများကြားလာရသဖြင့်ဖိုးစိန်ဆရာတော်ကိုလျှောက်လိုက်သည်။“ဟိုမှာရွာသားတွေလာကုန်ပြီဘုရား။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒိလိုဒေါသတွေနဲ့ဆိုဦးလေးရေချမ်းသေသွားလိမ့်မယ်ဘုရား.”
“ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး ဒိုးမောင် ဖိုးဇော် ”
ဆရာတော်တချက်လွှတ်အမိန့်ကြောင့်အကုန်ငြိမ်သက်သွားသည်။ဆရာတော်နှင့်ရွာလူကြီးများ ကျောင်းဝင်းထဲဝင်လာပြီးဦးရေချမ်းကိုချူပ်ထားသည့်နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ ရေချမ်းမရှိတော့။ကြိူးများကဖြေလျှက်သား။ဖိုးစိန်မှာဆရာတော်ကိုမျက်နှာငယ်လေးနှင့်လက်အုပ်ချီရှိခိုးပြီးတောင်းပန်ရှာသည်။“ဆရာတော်ဘုရား..တပည်တော်လွှတ်လိုက်တာပါဘုရား။တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမယုံနိုင်လို့ဒီလူအုပ်နဲ့ဆိုဦးလေးရေချမ်းသေသွားမှာစိုးလို့လွှတ်ပေးလိုက်မိတာပါဘုရာ။တပည့်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အပြစ်သာပေးပါတော့။ဦးလေးရေချမ်းပြောသွားတာဖိုးဇော်ဒိုးမောင်လို့နှစ်ခွန်းပြောသွားတယ်ဘုရား”
“ အရီး. ဦးလေးရေချမ်းရော ..ဦးလေးရေချမ်းရော ”
“ ဟင် .ဘာဖြစ်လို့ဦးလေးရေချမ်းက ကျမကိုဒုက္ခပေးတာလဲ။ မဟုတ်ပါဘူး”
“ သမီးဘဲ အရီးတို့မေးတော့ သမီးကိုဒုက္ခပေးတာ ရေချမ်းဆို ”
“ ဟာ မှားကုန်ပြီ မှားကုန်ပြီ ဒုက္ခပါပဲဦးလေးရေချမ်းတော့ဒုက္ခ္ခရောက်တော့မှာဘဲ ”
မသီတာတစ်ယောက် အတင်းထလေရာ အကုန်ဝိုင်းဆွဲပြီးမေးကြလေသည်။
“မှားကုန်ပြီအရီးရယ်..ကျမကိုဖိုးဇော်တို့ညီအကိုတွေအန္တရာယ်ပြုတာဦးလေးရေချမ်းက၀င်ကူညီတာအရီးရဲ့။ကျမမြို့ကပြန်လာတာ ရေအိုးကုန်းကလူတွေကိုအားနာလို့ ချောင်းထိပ်အထိဘဲပို့သည်ဘက်မှာဖိုးစိန်တို့လာကြိုမယ်ဆိုပြီးတစ်ယောက်ထဲပြန်လာတာဒီဘက်ရောက်တော့ဦးလေးေ၇ချမ်းကစောင့်ပေးနေတာ။အဲဒီမှာဖိုးဇော်တို့ညီအကိုကမူးပြီးကျမကိုဆွဲလားရမ်းလားလုပ်လို့သူအရိုက်ခံလိုက်ရတာ။ကျမမြင်လိုက်တယ်ဒိုးမောင်ရိုက်ချလိုက်တာသွေးထွက်လွန်နေလောက်ပြီ။ခုဘဲဘယ်အချိန်ရှိနေပြိလဲဒုက္ခပါပဲ သေကုန်ပြီလားမသိဘူး”
မသီတာအ၀တ်အစားတွေသေချာပြန်ဝတ်ပြီးဆေးအိတ်ကိုကောက်ယူကာ ဒေါ်ခင်မှုံနဲ့အတူအိမ်မှာကျန်ခဲ့သောလူတစ်ချိူ့နှင့်ဆရာတော်ကျောင်းကိုအပြေးလိုက်လာကြသည်။ ကျောင်းရောက်တော့ဆရာတော်ကိုလျှောက်လိုက်တော့ဆရာတော်ကခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နှင့်မိန့်ရှာသည်။
ဆရာတော့်စကားအဆုံးမသီတာတို့အကုန်ကမန်းကတန်းရွာသားများ ပြေးထွက်ရာဆီလို့ နောက်ကနေအမှီလိုက်ကြရတော့သည်။
ရေချမ်းတစ်ယောက်လွမ်းစေတီကုန်းပေါ်သို့တက်ပြေးသည်။ကုန်းပေါ်အရောက့်အနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူများမီးတုတ်များဖြင့်လိုက်လာသည်ကိုမြင်သဖြင့်မြင်းပလုံချောင်းသောင်ပြင်ထဲသို့တရွေ့ရွေဖြင့်ဆင်းပြေးပြန်လေသည်။တကိုယ်လုံးလဲတုန်ရီမောဟိုက်လျှက်။ချောင်းပြင်ကကျယ်သလိုလူကသွေးထွက်လွန်နေသဖြင့်မြန်မြန်မသွားနိုင်။ချောင်းလယ်ရောက်တော့လွမ်းစေတီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးလက်အုပ်လေးချီပြီးတဟီးဟီးနှင့်ငိုရှာသည်။အရှင်ဘုရားကယ်တော်မူပါ။လက်အုပ်ချီပြီးတိုင်တည်မိသည်။သူမဟုတ်ကြောင်းဘယ်လိုသက်သေပြရပါမည်နည်း။သူဆရာဝန်မလေးကိုဒုက္ခမပေးခဲ့ပါ။သူဘယ်လိုသက်သေပြရပါမည်နည်း။သူတအားကြောက်သည်။ခေါင်းကလဲတအားမူးနေပြီ။မျက်ရည်များတွင်တွင်ကျလျှက်ခြေလှမ်းများကိုရေအိုးကုန်းရွာဖက်သို့ဦးတည်လိုက်တော့သည်။။ရွာသားတွေ စေတီကုန်းပေါ်ရောက်တော့မီးတုတ်များဖြင့်ဟိုဟိုသည်သည်ရှာကြရာမတွေ့။ဒိုးမောင်ကလှမ်းမြင်လိုက်သည်။“ဟိုမှာ ရေချမ်း သောင်ပြင်မှာပြေးနေတယ်။”
ညီအကိုနှစ်ယောက်တုတ်ဆွဲပြီးချောင်းစပ်သို့ပြေးဆင်းကြသည်။ထိုခန၌ထိန်ထိန်သာနေသောလကြီးမှာတိမ်ဖုံးတချက်ကွယ်တစ်ချက်ဖြစ်နေသည်။နားကွဲမတတ်မိုးခြိမ်းသံများလဲရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ နွေလည်ခေါင်ကြီးမိုးခြိမ်းသံများရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်လူအများလဲအံ့သြကုန်ကြသလိုချောင်းစပ်ကိုရောက်နေသောဖိုးဇော်တို့ညီအကိုလဲအံ့အားသင့်သွားသည်။ ရေချမ်းကိုမြင်နေရပြီ။ ရေချမ်းဖော်လျှင်သူတို့ညီအကိုဆရာဝန်မလေးကိုဒုက္ခပေးတာပိုသက်သေခိုင်လုံသွားနိုင်သည်။စဉ်းစားဆင်ခြင်ညဏ်နည်းပါးသောဦးနှောက်။ငယ်စဉ်ကတည်းကမုန်းသောစိတ်တို့ကြောင်ဒေါသတို့ကိုမထိန်းနိုင်ကြတော့။“လာကွာ..ဆက်လိုက်မယ်ဟိုလူကြီ်းကိုမြင်နေရပြီ”
ညီအကိုနှစ်ယောက်ချောင်းစပ်မှအလယ်သို့ဆက်ပြေးလိုက်လာသည်။မီလုမီခင်ဖြစ်လာပြီ။တရွေ့ရွေ့ပြေးနေသောရေချမ်းမှာလည်းတဖက်ချောင်းစပ်သို့ရာက်တော့မည်။စေတီကုန်းပေါ်မှာလူများလည်းထိုတဝေါဝေါအသံများကြားလာသောကြောင့်ဖိုးဇော်တို့ကိုအော်ခေါ်ကြသည်။“ ဟေ့ကောင်တွေ ပြန်လာခဲ့ကြ ပြန်လာခဲ့ကြ.ချောင်းရေကျလာပြီ ပြန်လာခဲ့ကြ..”မသီတာတစ်ယောက်ချုံးပွဲချငိုတော့သည်။ဦးရေချမ်းသူမကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရှာပြီ။ကယ်မရကူမရနှင့်။ဒိုးမောင်တို့ညီအကိုမှာတော့ ပြန်မလှည့်လာနိုင်ဘဲဒေါသအလျှောက်တာ့ဘဲမှီလုမှီခင်ဦးရေချမ်းနောက်သို့သာအတင်းလိုက်နေရာတဖက်သို့လည်းပြန်လှည့်၍မရတောပြီ။ဦးရေချမ်းကတစ်ဖက်ချောင်းအစပ်နားသို့ရောက်ချေပြီ။သူတို့ညီအကိုက ချောင်းအလယ်ကျော်ကျော်လေးတင်။”“ “ဟာ …………………..”
စေတီကုန်းပေါ်ကလူများကတော့အကုန်လုံးအံသြနေကြသည်။လရောင်အောက်မှာဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီးရုတ်တရက်ကျလာသောတောင်ကျရေများအကြားမျောပါသွားသောဖိုးဇော်တို့ညီအကိုကိုကြည့်ရင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရင်းမှင်သက်မိနေကြသည်။ထူးဆန်းသည်မှာ နွေလည်ခေါင်ကြီး တောင်ကျရေများမည်သို့ကျလာပါသနည်း။မသီတာလရောင်အောက်တဖက်ကမ်းမှာရပ်နေဟန်ရှိသောမှုန်ပြပြလူရိပ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလေမှမျက်ရည်များကြားမှသက်ပြင်းချနိုင်တော့သည်။မသီတာရှင်းပြမှု့ကြောင့်ရွာသားများကလည်းသူတို့စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲဒေါသတကြီးဖြင့်ဖိုးဇော်တို့သွေးထိုးပေးသည့်အတိုင်းရေချမ်းကိုရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ရန်လုပ်ခဲ့မိသည့်အပေါ်နောင်တရစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသည်။ရုတ်တရက်လဲဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးဖို့မလွယ်တော့။ ဖိုးဇော်တို့ညီအစ်ကိုလဲသည်လောက်သန်သည့်ရေစီးနှင့်အသက်ရှင်ဖို့လမ်းမြင်တော့ချေ။ဒဏ်ရာများရနေသောသွေးထွက်လွန်နေသောရေချမ်းကိုလဲသူတို့အချိန်မှီကယ်လို့လဲမဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်ရွာလူကြီးများရှေ့တွင်ခေါင်းငုံ့ရင်းအသံတိတ်နေကြတော့သည်။တချို့မိန်းမများကတော့ဦးရေချမ်းသေပါပြီဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်၇ည်ကျနေကြသည်။စိတ်ထိခိုက်၍ငိုကြွေးနေရှာသောမသီတာကိုဒေါ်ခင်မှုံတို့မိန်းမများရွာလူကြီးများခြံရံလျှက်ရွာထဲသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။တောင်ကျရေများကတော့တဝေါဝေါစီးကျလျှက်….
အမှန်တရားအတွက်.မြင်းပလုံချောင်း၏ဒေါသတကြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပုံကကြာက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလှသည်။နွေလည်ခေါင်ကြီးမိုးလည်းမရွာဘဲတောင်ကျရေများရုတ်တရက်ကျလာခြင်းကအားလုံး၏စိတ်တွင်ရေချမ်းအတွက်အမှန်တရားကို မြင်းပလုံချောင်းကသစ္စာဆိုပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိသွားခဲ့ကြသည်။ရေချမ်းတစ်ယောက်ရှိသမျှအားအင်ကိုစုပြီးချောင်းကမ်းပါးတွင်ရပ်နေရင်းလရောင်အောက်မှာ မြင်နေရသောလွမ်းစေတီကိုလက်အုပ်ချီလျှက်ငိုကြွေးနေရှာသည်။ပါးစပ်ကလဲ“မဟုတ်ဘူး..မဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားကယ်တော်မူပါ”ဟုတတွတ်တွတ်ရေရွတ်နေသည်။သူသည်မျက်ရည်များကြားမှတရွေ့ရွေ့နှင့်ဝေးသွားသောမီးရောင်များကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း နှင့်ပင် ခွေကျသွားလေတော့သည်။
တောင်ကျရေများအသံကြောင့်အ်ိပ်ပျော်နေကြသော ရေအိုးကုန်းရွာကိုလဲ နိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွား ပြီး နွေလည်ခေါင်ကြီးထူးဆန်းသောအခြင်းအရာကြောင့်ရေအိုးကုန်းရွာမှရွာသားများလည်းမီးတုတ်များဖြင့်ချောင်းကမ်းစပ်သို့ရောက်လာကြလေရာ.................................။
လွမ်းစေတီကုန်းပေါ်မှာအမျိူးသမီးငယ်တစ်ဦးယောဂီသဘက်လေးခြုံလျှက် ခေါင်းလောင်းထိုးအမျှဝေနေသည်။ ခေါင်းလောင်းကိုသုံးချက်ထိုးပြီးသော်ထိုမိန်းမငယ်သည်ချောင်းဘက်သို့မျက်နှာမူပြီးဝေနေယျသတ္တ၀ါများကိုမေတ္တာပို့နေသည်။ ပြီးတော့ စေတီခြေတော်ရင်းတွင်ကြုံ့ကြုံလေးထိုင်နေရှာသောလူကြီးတစ်ဦးထံသို့ လျှောက်သွားပြီးရပ်လိုက်သည်။“ဦးလေးရေချမ်း.လာကျမနဲ့အတူ စေတီပေါ်မှာသစ်ရွက်ခြောက်တွေအမှိုက်တွေကျုံးကြမယ်နော်။” “ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့..”ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နှင့်ထိုအမျိုးသမီးငယ်ပြောသည့်အတိုင်းတသွေမတိမ်းပင်စေတီရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာကြွေကျနေသောသစ်ရွက်ခြောက်များကိုလိုက်လံကောက်ပြီးတောင်းထဲသို့ထည့်နေလေရာအမျိုးသမီးငယ်မှာ အေးချမ်းသောအပြုံးနှင့်ထိုလူကြီးအားကြည့်နေတော့လေသည်။
( ပြီးပါပြီ )
၇ ရက် ၅ လ ၂၀၁၃
အစကနေ အဆုံးထိ တရိပ်ချင်း ဆွဲခေါ်သွားတာပဲ...ဖတ်ရတာ အရသာရှိပါဘိ...
အမယ်မင်း... ဒါမျိုးလဲ ရေးဖွဲ့တတ်တာကိုး...။ အခန်းလေးတွေ ခွဲလိုက်ရင် ဖတ်ရတာ ပိုအရသာရှိသွားမယ် ညီမရေ..။
ရောက်လာတော့လည်း ဇတ်လမ်း ဇတ်အိမ်ကောင်းနဲ့တိုးချေပြီ
မသီတာ အကြောင်းလေးကိုပဲ တွေးနေမိတယ်